Banaanbaxa nolosha qaaliga ee Kenya - BBC News Somali
Banaanbaxa nolosha qaaliga ee Kenya
Image caption Dadka ayaa ka mudaaharaadaya sicirka qaaliyoobay ee cuntada daruuriga iyo shidaalka
Banaanbaxan oo looga cabanayo sicirka cunada iyo shidaalka oo kor u kacay. Dowladda kenya ayaa todobaadkii la soo dhaafay mar qura ay si aad ah ugu dartay qiimihii la siisanayey litarkii shidaalka, taas oo keentay in qiimaha shidaalka uu kor u koco boqolkiiba labaatan.
Meelo ay ka mid yihiin magaalada Mandera ayaa waxaa haatan lagu iibsanaa liitarkii shidaalka ahaa in ka badan 120 shillin oo ka badan hal dollar iyo bar.
Qiimmaha shidaalka ee kor u kacay ayaa waxa uu saameyn xooggan ku yeeshay dhamaan qeybaha kale nolosha siiba cunnada daruuriga ah, ururada bulshada rayidka oo soo qabanqaabiyey dibad baxan ayaa waxaa ay ka dalbvanayaan dowladda in ugu yaraan ay hoos u dhigto qiimaha cunnada iyo shildaalka
Inkastoo la sheegayo in mushkiladaha ka jira dunida carabta iyo waddamada ku yaala waqooyiga Africa ee soo saara shidaalka inay sababeen kor u kaca qiimaha shidaalka caalamka, oo haatan la siisanayo in ka badan boqol iyo labaatan dolarr fuustadii, haddana ururada bulshada rayidka ayaa waxay sheegayaan in dowladda looga baahanyahay in ay dhinto cashuurta ay saarto ama ka qaado saliida dibada laga soo gashado.
Bilow Kerow, oo ah siyaasi horay uga tirsanaan jiray barlamaanka, haatana ka mid ah gannacsatada dibada ka soo gashata shidaalka ayaa waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in dowladda ay dhinto cashuurta ay ka qaato shidaalka, iyo sidoo kale in ay sameyso meel ay ku keydsan karto shidaalka si ay u iibsato marka uu qiimaha hoos u dhaco ugana faa'ideysato marka uu sicir barar ku yimaado suuqa caalamka.
Iyo sidoo kale in loo baahanyahay in Kenya ay ka faa'ideysato fursooyinka ay ka helayso waddamada soo saara shidaalka ee doonaya in shidaalka uga iibiyaan qiimo jaban, iyagoo daneynaya saaxiibtinimada iyo xiriirka ka dhaxeeya.
Dalka deriska la ah Kenya ee Uganda ayaa isaguna waxaa todobaadyaddii la soo dhaafay ka socday dibed baxya la mid ah kan ka dhacay kenya oo la xiriira sicirka cunnada iyo saliida.